Ukuhamba kweRage ngexesha leZibetho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ukuhamba kweRage ngexesha leZibetho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UGqr Peter Tarlow
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, amagosa ezokhenketho aqaphele ukuvela kweentlobo ezahlukeneyo zomsindo phakathi koluntu ngokubanzi ngakumbi kwabo bahambahambayo. Lo msindo waqala ukubonakala ngohlobo lomsindo wendlela emva koko waba ngumsindo womoya, waphela waba ngumsindo wokuhamba opheleleyo, enomsindo ngamazwi ngamanye amaxesha wajika waba bubundlobongela ngokwasemzimbeni. Ngoku ngexesha lobhubhane, noluntu aluzange luqiniseke malunga nokuba yintoni na eza kuvulwa okanye ivaliwe, sijamelene nolona hlobo lutsha lomsindo: "Ukuhamba Ubushushu Bomsindo".
Ngenxa yolonyuso lwezokhenketho olwandayo kunye namanqanaba enkonzo enkenenkene kubathengi, ezinye iindwendwe ziba nomsindo kwaye zongeze kule ngxaki, uCovid-19 wenze umhlaba wokuhlala kwindawo apho abantu baphuma nzima, epenteni -up amandla kunye nokudana, uloyiko, kunye nokubonakala ngathi kukuhamba okungaguquguqukiyo kwemigaqo emitsha yokuhamba kukarhulumente. Ukongeza kwezi ngxaki abantu abaninzi abasebenza kumzi-mveliso wohambo boyika imisebenzi yabo kunye nemisebenzi inokuthi shwaka ngokukhawuleza.
Oku kunyuka komsindo wokuhamba kuye kwabangela impembelelo efanayo kwicala labasebenzi bezokhenketho; uninzi lwazo kufuneka lujongane mihla le neendwendwe ezinomsindo kunye neendwendwe. Umsindo womqeshwa udla ngokubonakaliswa ngendlela ekrwada, kodwa phantsi kweemeko ezithile kunokuba ndlongondlongo kwaphela. Kwinqanaba lobundlobongela, iTour Employee Rage (TER) iphakathi kwemicimbi yobundlobongela emsebenzini kunye nobukrwada bomqeshwa. I-TER ingaphezulu komcimbi wenkonzo yabathengi abahlwempuzekileyo, ludibaniso loloyiko, ukukhathazeka, kunye noluntu olunomsindo hayi nakubani na ngokukodwa kodwa kwihlabathi. Zonke iintlobo zomsindo wokuhamba zinokuvelisa isiseko seemvakalelo zomsindo wentaba-mlilo. Oku akucingeleki okuzibonakalisa phakathi kwabantu ekufuneka besebenzele uluntu rhoqo kwaye bahlala beziva bengaxatyiswanga kwaye noluntu oluhambahambayo oluhlala lusabelana ngezi ngxaki. Ukuqhuma komsindo kunokwenzeka ukuba kwenzeke phantsi kwezi meko zilandelayo kwaye kwezi ntlobo zilandelayo zokhenketho / imisebenzi yeendwendwe:
1) Xa kufuneka ujongane nengxaki yokhenketho nabantu abadityaniswe nomzi mveliso wokuhamba nokhenketho, kodwa bangaziboni beyinxalenye yomzi mveliso. Imizekelo yabo bantu ngamagosa asebupoliseni asebenza kwiindawo eziphezulu zokhenketho, abantu abasebenza kwizikhululo zeebhasi okanye zoololiwe, kunye neengcali zogutyulo ezisebenza kwiindawo ezinabantu abaninzi. Umsindo uhlala wenzeka xa aba basebenzi bengaboni ubudlelwane obunqamleyo phakathi komsebenzi wabo kunye nenkonzo yabathengi
I-2) Umsindo unokwenzeka xa abasebenzi benomsindo kubaqeshi babo kwaye befumana imeko yokuziva bengonwabanga okanye isithukuthezi, okanye xa umhambi eziva ngathi urhaxwa kulwandle lweshishini lokuhamba kunye noorhulumente.
I-3) Umsindo uhlala uvela ngamaxesha aphezulu okuhamba (ngeeholide) nangexesha lemozulu enzima
I-4) Umsindo unokwenzeka xa abasebenzi boyika ukuphulukana nesikhundla sabo kwi-automation okanye endaweni yeerobhothi, bazive bengaxatyiswanga ngabaphathi okanye bezokubona uluntu (kwaye ngokuchaseneyo) njengeentshaba kunokuba babe ngabantu.
Ukujongana nemicimbi yomsindo qaphela oku kulandelayo:
-Ukuba ukwimeko yolawulo yazi ke umsebenzi, ukukhathazeka, kunye nobunzima. Abaphathi bezokhenketho kufuneka bazi zonke iinkalo zeshishini labo. Wonke umntu osebenza kwezokhenketho kufuneka achithe usuku lube lunye kumsebenzi ngamnye ophantsi, njengoweta okanye umgcini weweyitala, ukusebenza njengentsimbi, ukuba kwindawo yokugcina imali, njl. Kuphela emva kokwenza lo msebenzi abaphathi baqala ukunika izisombululo zokwenyani kwimicimbi yomsindo ngeli xesha lobhubhane.
-Ukubonelela ngoQeqesho lweeNkonzo zaBaxumi rhoqo. Ukuthintela imiba yomsindo qinisekisa ukuba bonke abasebenzi baqeqeshwe kakuhle kubudlelwane phakathi kwenkonzo elungileyo yabathengi kunye nomsebenzi wabo. Abantu abanjengabasebenzi bokucoca, abasebenza kwisikhululo sezothutho, abaqhubi beebhasi, kunye namasebe amapolisa, bahlala benganikwanga ithuba lokubona ubudlelwane phakathi kwento abayenzayo kunye noluntu. Nceda aba bantu bajongane nemicimbi yomsindo ngokudlula kwiindawo ezinje:
-Ukuncuma kunokuyiphelisa njani imeko
-Kutheni indlela esilisebenzisa ngayo ilizwi lethu inokuthomalalisa (okanye ukucaphukisa) imeko.
-Ukubaluleka kokwenza umbono wokuqala oncomekayo
-Ubudlelwane phakathi kwenkonzo elungileyo yabathengi kunye neengcebiso.
- Ungathathi njani uhlaselo lomlomo ngokobuqu
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba abantu abasebenza kwiimeko zoxinzelelo eziphantsi koxinzelelo bahlala belahlekelwa ngumbono wokuba uluntu oluhambahambayo lunabantu abathile. Uncedo lokunciphisa uxinzelelo ngokubonelela ngekhefu kwishedyuli yomsebenzi. Iindawo ezininzi zokhenketho ezinjengeetheminali zesikhululo seenqwelomoya zibonakala ngathi ziyilelwe ukonyusa uxinzelelo kunye nokudana kunokuba zisinciphise. Ngoku ngemicimbi yokuphambuka eluntwini kunye noloyiko lokungcoliseka kwesihlwele amandla okuqhuma komsindo asengaphezulu.
-Sebenzisa iiseshoni zegab. Rhoqo abahambi kunye nabasebenzi abasokolayo abanamntu wokuthetha naye ngexesha lomsebenzi okanye ixesha lokuhamba. Nika iiseshoni apho abantu banokuveza khona ukukhathazeka kwabo, babelane ngoloyiko lwabo kwaye batshintshisane ngezimvo malunga nendlela abanokuzenza ngcono ngayo ngokusebenzela uluntu okanye ukujongana neemeko ngendlela enesidima.
-Ukubonelela ngokulayita kakuhle kunye neendawo zomsebenzi ezilawulwa bubushushu. Kunzima ngokwaneleyo ukujongana nabakhenkethi abadiniweyo nabanxungupheleyo phantsi kwezona meko zilungileyo, kodwa ukuba, umzekelo, umnquba wecashier ushushu kwaye uxinekile, umsindo unamandla aphezulu okuba ubekhona.
Yiba novelwano kubasebenzi, kodwa qiniseka ukuba umsindo awamkelekanga. Musa ukuvumela abaqeshwa bakho okanye isiqu sakho siwele kwisifo sokucinga ukuba zonke iindwendwe ziziziyatha okanye "zilutshaba." Rhoqo abantu abaninzi kakhulu kukhenketho nakumashishini okuhamba bayalibala ukuba umthengi sesona sizathu sokuba sibe nomsebenzi. Banokulibala kananjalo ukuba ngexesha lobhubhane wonke umntu usezingxakini kwaye uyoyika ukugula. Abantu kufuneka bakhuphe kwaye bafumane iindlela zokuhambisa unxunguphalo lwabo kwiindlela ezilungileyo. Iingcali kwezokhenketho kufuneka zisoloko zigxininisa ukuba xa kuchazwe ingxaki kufuneka kusonjululwe isisombululo.
-Kulindelwe ingqumbo ukuqhubela phambili kwimiba yobundlobongela. Abaqeshi kunye nabaphathi kufuneka bahlole imvelaphi yezembali zolwaphulo-mthetho kunye neemvakalelo zabasebenzi, kwaye babuze imibuzo ethile eneenkcukacha ezifanelekileyo. Ezinye, kodwa kude kuzo zonke, iimpawu zesilumkiso zobundlobongela zinokuba:
-Sebenzisa ubuhlanga, ubuhlanga, okanye inkolo
-Izakhono zokulawula umsindo
-Ukubonakaliswa kweparanoid okanye indlela yokuziphatha echasene nentlalontle
-Ukuziphatha okungaphaya kokuziphatha kunye nokuziphatha okugqithisileyo kuboniswe njengokudelela abanye
-Abantu abawela kwicandelo "ndilungile kwaye awunguye".
Ukusebenza kunye nokuphathana ngesidima ubhubhane we-2020 unokuba yimbewu yokuzalwa kwakhona kwishishini lokhenketho. Sisonke masenze eli ibe lixesha lokungalili, kodwa lixesha lokutyala imbewu yempumelelo yangomso.
umthombo: IiTidpids zoKhenketho ngo-Agasti 2019